Misokatra indray ny taranja golf sy ny toeram-pilalaovana Puerto Rico
Home » Toerana fitsangatsanganana » Misokatra indray ny taranja golf sy ny toeram-pilalaovana Puerto Rico
Maro ny Puerto RicoNisokatra indray ny taranja golf 18, araka ny nambaran'ny governora Wanda Vázquez farany teo.
Ny fitandremana, faharetana ary fifehezana dia foto-kevitr'ireo didy mihetsika mavitrika eto amin'ny Nosy natao hiarovana Puerto Rico mponina sy mpitsidika. Hitohy izany rehefa hisokatra tsikelikely manerana ny Nosy ny orinasa maro. A 7 hariva ka hatramin'ny 5 maraina ny curfew dia hijanona amin'ny toerany mandra-pahatongan'ny Jona 15, ary ny olona rehetra dia takiana amin'ny fanaovana sarontava rehefa any ivelany na ao anaty orinasa.
Puerto Rico, faritany amerikana, hanatevin-daharana ny sisa amin'ny Etazonia raha ny momba ny lalao; nisokatra indray ny taranja golf any amin'ireo fanjakana 50 rehetra.
Misokatra ho an'ny rehetra ny taranja Islandy sasany, ao anatin'izany Royal Isabela, Club Deportivo del Oeste, sy maro hafa. Ny taranja Island hafa dia misokatra ho an'ny mpikambana ihany - TPC Dorado Beach, Palmas Athletic Club, ary Wyndham Grand Rio Mar, ohatra - miaraka amin'ny besinimaro antenaina horaisina tsy ho ela. Raha mila tsipiriany momba ny toeram-pilalaovana tsirairay dia jereo ny nomeraon-telefaona etsy ambany.
Ny fandaharam-pianarana dia nametraka fiarovana mba hanatsarana ny fialam-boly azo antoka, ao anatin'izany ny mpiasa mampiasa fitaovam-piarovan-tena, ny fanadiovana ny sarety golf ary ny faritra fivarotana Pro Shop mandritra ny tontolo andro, sy ny maro hafa.
An'i Puerto Rico Kianja golf 18 no hita manerana ny Nosy - manomboka amin'ny tendrony avaratra andrefana ka hatrany amin'ny morontsiraka atsinanana - misy maromaro any avaratra atsinanana Puerto Rico akaikin'ny renivohitra San Juan. Ny nosy dia toerana mahavariana izay ahitana tantara, kolontsaina, gastrolojia, fiainana amin'ny alina, morontsiraka, hotely ary toeram-pialofana. Tsy mila pasipaoro ho an'ny olom-pirenena amerikana izany, mampiasa fiteny roa, mampiasa ny dolara amerikana ho an'ny vola ary izy no foiben'ny rivotra Karaiba. Misy trano fisakafoanana maherin'ny 4,000, ary ny toeram-pialan-tsasatra dia manomboka amin'ny marika fandraisam-bahiny ambony ka hatolotra ho lohalaharana eran-tany Airbnb 10.
Ny toerana golf any Island dia misy:
TPC Dorado Beach (lavaka 36)